Soo galootiga iyo shaqo la’aanta | Somaliska
Warbixin cusub oo ay soo saartay Waaxda Tirakoobka Sweden (SCB) ayaa lagu sheegay in 3 meelood labo meel ay shaqo la’aan yihiin dhalinyarada soo galootiga ah. Wasiirka Isdhexgalka Erik Ullenhag ayaa ku tilmaamay warbixintaan mid walwal abuureysa.
“Haddii aad tahay qof dhalinyaro ah oo soo galooti ah oo aadan shaqo haysan ayaa dareemi kartaa in aadan bulshada qeyb ka ahayn” ayuu yiri wasiirka.
Wasiirka ayaa sheegay in shaqo la’aanta soo galootiga lagu sababayn karo dhaqaalaha aduunka oo hoosu dhacay. Si xal loogu helo arintaan ayuu sheegay wasiirku in loo baahanyahay dadaal badan iyo in iskuulada ay tahay in door muhiim ah ay ciyaaraan. Waxa kale oo uu sheegay in nidaamka cayrta loo baahanyahay in dib u habeyn lagu sameeyo.
“Dadkaan waa kuwo ku xiran taageerada cayrta, waxaan u baahanahay in aan ka fikirno xaga shaqada” ayuu yiri Erik Ullenhag.
Waxa uu intaas ku daray in bulshada amaankeedu ku jiro in dadku ay shaqeeyaan, kamuunada qaar ayaa taageero fiican bixiya sidii shaqo dadku ku heli lahaayeen balse waxa uu sheegay in loo baahanyahay in kamuunada guud ahaan ay ka qeyb qaatan iyo in sharciyada la badalo.
Warbaahinta Europe waa inay wax ka bedesho qaabka ay wax uga qorto Soomaalida
mokhtar xuseen suldaan says:
May 26, 2011 at 19:50
walaal adigoaano mahadsan waxaan kaa rabnay telkaaga waxaanu nahay gudi ka dhisan växjö marka waxaan rabnaa inaanu kaagala hadalno arimaha soomaalida
Asc, walaal waxaad fariin iigu soo diri kartaan emailka info@somaliska.com aniga ayaa idin soo diraya nambarka aad igala soo xiriiri kartaan.
As waan kusalaamey saaxiib jimcale salaan kadib waxaan rabaa in aan ku weediyo su aal arimaha soomalid maxaa dhacay labadaan maalmod wax warbaxin majirtmiiya mis weey dhamaati miyaa arinta soomalida